ဘောင်အတွက်လူမီနီယမ် extrusion ပရိုဖိုင်းကို
အလင်းရောင်ဘောင်နှင့် LED lightbox အတွက် Aluminum extrusion profile ကို
T-slot အတွက်လူမီနီယံ extrusion ပရိုဖိုင်းကို
အပူစုပ်သို့မဟုတ်ရေတိုင်ကီများအတွက်လူမီနီယမ် extrusion ပရိုဖိုင်း
Foshan ChangYuan လူမီနီယံကုမ္ပဏီ, Ltd
ဖုန်း: +86 18575799983
တယ်လီ: +86 0757 85102698
ဖက်စ်: +86 0757 85112248
အီးမေးလ်: info@alaluminum.com; kylepeng@alaluminmum.com
လိပ်စာ: Cengang လမ်း၏အနောက်ဘက်, Heshun Guihe လမ်းမ, လီရှူးမြို့, နိုင်ဟိုင်ခရိုင်, ဖိုရှန်မြို့, ဂွမ်ဒေါင်း,တရုတ်.
Recently, the European Aluminum Association has proposed three measures to help support the recovery of the automotive industry. Aluminum is part of many important value chains. Among them, the automotive and transportation industries are aluminum consumption areas. Aluminum consumption in this industry accounts for 36% of the entire aluminum consumer market. Since the auto industry is facing severe reductions or even suspension of production since the outbreak, the European လူမီနီယံ profile များကို စက်မှုလုပ်ငန်း (alumina, primary aluminum, recycled aluminum, primary processing, and final products) also faces great risks. ထို့ကြောင့်, the European Aluminum Association hopes to quickly support the auto industry's recovery.
လက်ရှိအချိန်မှာ, the average aluminum content of cars produced in Europe is 180 kg (about 12% of the weight of the car). Due to the lightweight nature of aluminum, aluminum has become an ideal material for vehicles to run more efficiently. As an important supplier to the automotive industry, European aluminum manufacturers rely on the rapid recovery of the entire automotive industry. Among the key measures for the EU automotive industry to support the restart of the automotive industry, European aluminum producers will focus on the following three measures:
Currently, many model certification agencies in Europe have closed or slowed down operations. This makes it impossible for car manufacturers to certify new vehicles that are planned to be put on the market. ထို့ကြောင့်, the European Aluminum Association requested the European Commission and member states to make efforts to quickly reopen or expand these facilities to avoid delaying the review of new car regulatory requirements.
အမှတ်အသားများ (Tags): လူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းကို, aluminum profile china, လူမီနီယံပရိုဖိုင်းကိုထုတ်လုပ်သူ, လူမီနီယံပရိုဖိုင်းကိုပေးသွင်း, စက်မှုအလူမီနီယံပရိုဖိုင်းကို
စက်မှုအလူမီနီယံ profile များကို၏အပြောင်းအလဲနဲ့နည်းလမ်းများဘာတွေလဲ?
စက်မှုအလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းဘောင်ကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ။ လူမီနီယံပရိုဖိုင်းကို ၀ ယ်သောအခါမည်သည့်အရာကိုဂရုပြုသင့်သနည်း
စက်မှုအလူမီနီယံ profile များကိုမျက်နှာပြင်ကုသမှုလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီခွဲခြားထားပါသည်
အဘယ်ကြောင့်လူမီနီယံ guradrail လူကြိုက်များဖြစ်လာ?
Cengang လမ်း၏အနောက်ဘက်, Heshun Guihe လမ်းမ, လီရှူးမြို့, နိုင်ဟိုင်ခရိုင်, ဖိုရှန်မြို့, ဂွမ်ဒေါင်း,တရုတ်.
Foshan ChangYuan လူမီနီယံကုမ္ပဏီ, Ltd © 2020 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး